Madaxweynaha Maraykanka oo Khudbad ka Jeedin doono Munaasabadda dabaaldega 4 July | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Maraykanka oo Khudbad ka Jeedin doono Munaasabadda dabaaldega 4 July
Madaxweynaha Maraykanka oo Khudbad ka Jeedin doono Munaasabadda dabaaldega 4 July
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maamuli doona munaasabad lagu xusayo dabaaldega 4-ta Luulyo, inkastoo walaac laga qabo Cudurka Coronavirus.
Madaxweynaha Maraykanka Mr Trump ayaa khudbad ka jeedin doonaa Xarunta South Dakota, taasoo muujineysa inuu yahay Madaxweyinihii 4aad ee Dalka Maraykanka.
Bandhig faneed ayaa lagu qaban doonaa munaasabada Maalinta Xorriyadda ka hor, oo ay ka qeyb galayaan Dad lagu qiyaasay 7,500 oo qof.
Maaskarada wajiga ayaa la heli doonaa laakiin looma baahna, iyo ku mashquulka bulshada si adag looma dhaqan-galin doono.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa wajahay dhaleeceyn ku aaddan qabashada dhacdada xilli kiisaska coronavirus ay sii badanayaan heerarka ka diiwaan gashan Dalka Mareykanka.
Booqashada madaxweynaha ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo faafitaanka Covid-19, walwal laga qabo Dilkii ka dhacay Dalka Maraykanka, iyo mudaaharaadyada kooxaha asalka Mareykanka ah.
Ku soo dhoweynta dadka munaasabadda, Guddoomiyaha Dalladda Jamhuuriga South Dakota Kristi Noem ayaa ku celceliyay codka madaxweynaha ee dibad-baxayaasha, isaga oo ku eedeeyay “in ay tirtirayaan casharrada taariikhda”.
“Tan waxaa loo sameeyaa si ula kac ah si loo naaquso mabaadi’da asaasiga ah ee Mareykanka,” ayay u sheegtay dadka faraxsan.
Iyadoo la hadlaysay Fox News toddobaadkan, Ms Noem waxay sheegtay in waji-xirka bilaashka ah laga heli doono munaasabadda bannaanka ee loogu talagalay dadka doortay inay xirtaan, laakiin “ma noqon doonno jahawareer bulsho”.
Dhaqdhaqaaqayaashu waxay muddo dheer ka soo qaateen taallada Mount Rushmore, oo laga dhisay dhul muqadas u ah qabiilka Sioux. Laba ka mid ah madaxweynayaashii hore ee la sawiray – George Washington iyo Thomas Jefferson – waxay lahaan jireen addoomo.
Go’aanka lagu qabanayo munaasabad ayaa lagu muransan yahay waqti marka dib loo qiimeynayo tiirarka guud ee jeneraalka Confederaalka iyo milkiileyaasha addoonsiga, xaalado badanna hoos loo dhigay, markii ay socdaan banaanbaxyada cunsuriyadda.
Dhacdada ka hor, koox ka mid ah mudaharaadayaasha asal ahaan Mareykan ah ayaa hor istaagay waddo weyn oo taallo madoow, taasoo dhalisay feejignaan dheeri ah oo ay la galaan booliska. Qaraxyada qiiqa iyo buufin basbaas, dhowr mudaaharaadna waa la xiray ka dib markii booliisku caddeeyeen in wadada ay xanibeen.
Previous articleDhAGAYSO:- R/Wasaare Ku-Xigeenka ee XFS oo Weerar Afka ah ku qaaday Dowlad Goboleedyada Dalka
Next articleWiil Dhalinyaro ah una Dhashay Dalka Ugandha oo Naftiisa u gubay laaluush ay Ciidamadda booliska Ugandha weydiiyeen awgeed
Wasiiradda Maaliyadda Dowlad Goboleedyada iyo Dowladda Dhexe oo Muqdisho ku kulmay
Taliska Ciidanka Asluubta oo shaaciyay tirada dadkii ku dhintey dagaalkii ka dhacay Xabsiga Dhexe
Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo la ogaaday inuu ka baxsaday Xabsiga Dhexe
Taliska Ciidanka Asluubta oo shaaciyay tirada dadkii ku dhintey dagaalkii ka...
Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo la ogaaday inuu ka baxsaday Xabsiga...
Dowladda Kenya oo Ammartay inay Musqulo ka dhisto Agagaarka Waddooyinka Waaweyn